विवादमा नेहाको कार्यक्रम , आयोजक परे पक्राउ
प्रकाशित : सोमबार, जेठ २७, २०७६१५:३६
संगीत । गत साताको विकेन्डको पर्खाइमा धेरै तन्नेरीहरू थिए । किनकी उनीहरुले मन पराएको गायिका नेहा ककड नेपाल आउदै थिइन् । नेहा नेपाल आउने तय भएपछी त्यहि अनुसार दर्शकले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न चाहे । आफ्नो मन पर्ने गायिकालाई प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न टिकेट लिएका दर्शकले जब उनलाई हेर्न पाएनन् , आक्रोशित भए । शनिबार ठमेल स्थित एलओडी (लर्ड अफ ड्रिङ्गस)मा पारामाउन्ट इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि.ले आयोजना गरेको कार्यक्रम विवादमा फसेको छ ।
२५ सय दर्शक क्षमता भएको क्लबमा आयोजकले क्षमताभन्दा बढी टिकट बिक्री गरेपछि कार्यक्रम विवादमा तानिएको हो । क्षमता भन्दा बढि दर्शक आएपछि दर्जनौं दर्शक क्लब बाहिर बस्न बाध्य भएका थिए । काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुको टोलीले आयोजक संस्थाका दीपक घिमिरे, रविन श्रेष्ठ र अर्का एक व्यक्तीलाई पक्राउ गरेको छ । कन्सर्टका लागि २,५०० इन्ट्री फि देखी टेवल बुक गर्दा २,५०,००० सम्मको रेट राखिएको थियो ।
परिसरका डीएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार पीडितले टिकट बराबरको रकम फिर्ता पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । सञ्चालकसँग र पिडक पक्षबीच टिकट बराबरको पैसा फिर्ता गराउने बारे छलफल भइरहेको बुझिएको छ । छलफलबाट निष्कर्ष ननिस्किए मुलुकी अपराध संहिताको ठगी कसुर अन्तर्गत पक्राउ परेका माथि कारबाही हुनेछ । पछिल्लो समय युवापुस्ता माँझ निकै चर्चामा रहेको एलओडी यस विवादसंगै केहि खस्किने त होइन ? भन्ने चर्चा पनि सुरी भएको छ ।
‘हेल्लो जिन्दगी’ मा श्वेता पनि !
‘क्यालकुलेटर’ मा सागरसँगै हरिश (भिडियो)
नवलको हिरोइन साम्राज्ञी
यस्तो देखियो अनमोलसंग सुहानाको जोडी (भिडियो)
अशोक भर्सेस अनमोल : ट्रेण्डिङमा अनमोल अगाडी